[Topnews:-] Dowladda Somalia oo la filayo iney xayiraad saarto Salaam Somali Bank iyo Taaj Money Transfer.
Wednesday October 28, 2020 - 07:38:00 in Wararka by Super Admin
Dowladda Somalia ayaa la filayaa iney ku dhawaaqdo xayiraadda Salaam Somali Bank sida ay Waagacusub u sheegeen hoowlwadeeno ka tirsan Bankiga dhexe.
Somalida oo horey ugu khasaaray Bankigii Al-Barakaat oo dhaqaalahoodii lagu xayiray waxey safaf dhaadheer u galaan hadda subax walba Salaam Somali Bank oo ay lacagahoodii kala baxeen.
Somalidu waxey sidoo kale ku khasaareen Forex oo Malaayiin dollar looga dhacay.
ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxey xaqiijinayaan in xayiraad la saarayo Salaam Somali Bank iyo Xawaaladda Taaj Express oo shatiga shaqadda lagala laabanayo.
Khubaradda Qaramadda Midoobay ee arrimaha Somalia ayaa warbixin sanadeedkooda ku soo bandhigay cadeeymo muujinaya iney Al-Shabaab lacag badan oo baadda marsadeen laba akoon oo uga furan Salaam Somali Bank.
Machad-ka Hiraal warbixin uu soo saaray ayuu ku sheegay iney argagixisadda Al-Shabaab bil walba ka aruursato koofurta Somalia lacag baadda oo dhan 15 Milyan oo dollar taas oo la rumeeysan yahay iney ku aruursadaan Salaam Somali Bank iyo EVC PLus Hormuud Telecom.
Maamulka Hormuud Telecom waxey aaminsan yihiin iney laaluush ku aamusin karaan Taliyeyaasha amniga, hoowlwadeenadda Wasaaradda Maaliyadda, Garsoorka dalka iyo Warbaahinta madaxabanaan laakiin taasi sida muuqata hadda meesha ayey ka baxday.
Haddii la doonayo in laga adkaado argagixisadda Al-Shabaab waa in si guud loo xayiro dhamaan Bankiyadda iyo telefoonadda ay lacagta baadda uga qaataan shacabka maxaa yeelay lacag kaasha kama qaadaan shacabka, ismana arkaan Al-Shabaab iyo dadka ay bil walba ka qaadayaan 15 Milyan oo dollar.